Dr. Tint Swe's Writings: Hiccups ကြို့ထိုးခြင်း
ဆရာရှင့် လသားကလေးတွေကျို့ထိုးတာ အစာကျေလို့ထိုးတာလား အစာအိမ်ထဲပြည့်နေလို့ ဝမ်းခေါင်းချဲ့လို့ထိုးတာလား အဲ့ဒါလေး အငြင်းပွားနေလို့ သိချင်ပါတယ်ဆရာရှင့်။
၂။ ဂျွတ်ထိုး ကိုလည်း ကြို့ထိုးလို့ ရေးရတယ်မလားဆရာ။
၃။ မင်္ဂလာပါဒေါက်တာ ကျနော် အသက် ၃၃ ကျား။ ကျို့ထိုးနေတာ ယခုပတ်အတွင်း (၃) ရက်ရှိပါပြီ။ လေလည်း အရမ်းထပါသည်။ ယခင် တစ်ပါတ်ကျော်ကလည်း ၃ ရက်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဆေးခန်းသွားပြ၍ ဆေးထိုးဆေစားပြီး ပျောက်သွားပါသည်။ ယခု ဖြစ်နေစဉ် ဆေးခန်းပြ ဆေးထိုးဆေးသာက်နေသော်လည်း မပျောက်သေးပါဒေါက်တာ။ တရက်လုံးမနားတမ်း ကျို့ထိုးနေပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ဆေးနည်းလေးပေးပါခင်ဗျာ။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရသေးပါ။ ပြုလုပ်ရန်ရောလိုအပ်ပါသလားခင်ဗျာ။ လေးစားစွာဖြင့်။
ကလေးငယ်လေးတိုင်း ကြို့ထိုးကြတယ်။ ရောဂါ မဟုတ်ပါ။ ကြို့ထိုးတာဟာ ရင်ခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကိုခြားထားတဲ့ ဒိုင်ယာဖရမ် ခေါ်တဲ့ ကြွက်သားပြားပြားခုံးခုံးကြီးက အလုပ်ပိုလုပ်တာဖြစ်တယ်။ သူ့တာဝန်က အသက်ရှူတာ။ သူ့အထက်မှာ အဆုတ်ရှိတယ်။
ဒိုင်ယာဖရမ်အောက်မှာ ညာဘက်က အသည်းနဲ့ ဘယ်ဘက်ကအစာအိမ်ရှိတယ်။ အဲဒီ ၂ ခုထဲက တခုခုမှာ တခုခုဖြစ်ရင် ကြို့ထိုးတယ်။ ကလေးငယ်တွေမှာ အစာအိမ်ထဲက အစာအိမ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေ ချိုစို့တိုင်း လေကိုပါ မျိုချတယ်။ ရေတိုက်လည်း လေပါမျိုချတယ်။ လက်စုပ်လည်း လေကျုပါမျိုချတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ နို့နဲ့လေ၊ ရေနဲ့လေ၊ အစာနဲ့လေရှိနေမယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ အဲတာတွေရှိလို့ အစာအိမ်လေးအထက်မှာကပ်နေတဲ့ ဒိုင်ယာဖရန်ကို ကလိသလို ဖြစ်စေရာကနေ ကြို့ထိုးတာဖြစ်တယ်။ လေ အောက်သက်လည်း သက်သာမယ်။ အထက်ဆန်လည်း သက်သာမယ်။
အစာအိမ်ထဲကရှိတာမှန်သမျှ အောက်ဆက်ဆင်းရတာ ပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အစာအိမ်ထဲက အကုန်ဆင်းဖို့ရာ လူကြီးတွေဆိုရင် ၄ နာရီလောက်ကြာတတ်တယ်။ ကလေးတွေမှာ အချိန်တိုတယ်။ အစာအိမ်လေးက သေးတယ်။
နောက်တချက်က ကလေးငယ်လေးတွေမှာ အထိန်းတွေကောင်းကောင်း မဖွံ့ဖြိုးသေးဘူး။ အစာအိမ်အပေါ်ထိပ်မှာ အထိန်းရှိတယ်။ အဲတာကောင်းနေမှ အန်တာနည်းတယ်။ အစာဟောင်းစွန်တဲ့နေရာ မထိန်းနိုင်သေးလို့ အညစ်အကြေးကို သည်အတိုင်းသွားကြတယ်။ ဆီးအိမ်အထွက် မထိန်းနိုင်သေးလို့ ရှူပေါက်ချတယ်။
ကလေးကြီးတွေဆိုရင် တခြားအကြောင်းခံတွေကိုပါ ထည့်စဉ်းစားရမယ်။ တချို့မှာ အစပ်စားလိုက်တာနဲ့ ကြို့ထိုးတယ်။ အဝင်လွဲတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ မျိုချတာမှာ အဆင်မပြေရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့မှာ တခါဖြစ်ရင် ရက်ဆက်ဆိုသလို ထိုးနေတယ်။ အရပ်နည်းတွေတော့ သိမှာပါ။ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုရှာရရင် အဲဒါကို ကုသရမယ်။ တချို့မှာ ဆေးကုရတဲ့အထိ ဆိုးတယ်။ အသည်းကြီးနေ ရောင်နေသူတွေ ကြို့ထိုးတယ်။
• Baclofen, Gabapentin နဲ့ Omeprazole, Rabeprazole ဆေးတွေကို သုံးတယ်။
• Chlopromazine ခေါ်တဲ့ စိတ်ရောဂါကုဆေးကို အအန်ရပ်အောင်နဲ့ ကြို့ထိုးတာရပ်အောင်လဲ သုံးနိုင်တယ်။ ဆေးက အတော်အိပ်ချင်လို့ ဆေးအဆ လျှော့ပေးရတယ်။
• သိပ်ဆိုးသူတွေအတွက် Haloperidol စိတ်ဆေး၊ Metoclopramide အစာလမ်းဆေးတွေ သုံးတယ်။
• GERD အစာခြေရည်အထက်ဆန်တာရှိရင် အဲဒါကိုကုသပါ။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။
• ပေါင်မုံ့ခြောက်ဝါးခြင်း၊ ရေခဲတုံးဝါးစာခြင်း၊ လျှာကိုဆွဲထုတ်နည်း၊ သကြားရည် လျှာပေါ်၊ ဒါမှမဟုတ် လျှာအောက် တင်ပေးခြင်း၊
• Phrenic nerve အာရုံကြောကို 0.5% Procaine ထုံဆေးထိုးပေးနည်း၊
• Bilateral phrenicotomy အဲဒီအာရုံကြောနှစ်ခုလုံးကို ခွဲစိတ်ဖြတ်ပြစ်ခြင်း၊
• နားထဲကို Lidocaine liniment 3% or gel 2% ဆေးထည့်ပေးနည်း၊
• Hypokalemia, Hyponatremia ခေါ်တဲ့ ပိုတက်ဆီယန်နဲ့ ဆိုဒီယန်ဓါတ်ဆား နည်းလွန်းတာဖြစ်လို့ ဆိုးတဲ့ ကြို့ထိုးတာဆိုရင် Carbonated beverage ကာဗွန်ထည့်ထားတဲ့အချိုရည်၊ ဆိုဒါ၊ စပရင်းဝါးတား၊ ကိုကာကိုလာ၊ စပရိုက်၊ အင်နာဂျီဒရင့်ခ်တွေကို သောက်နိုင်တယ်။
• Intranasal vinegar ဗနီဂါအရည်ကို နှာခေါင်းထဲထည့်နည်း၊
• Deltoid muscles ပခုံးကြွက်သားကိုနှိပ်ခြင်း။
အလွယ်နည်းကတော့ ခေါင်းကို လေမဝင်နိုင်တဲ့ ပလပ်စတစ်အိပ်တလုံး စွပ်ပါ။ လည်ပင်းနေရာမှာ ကိုယ့်လက်နဲ့ စုစည်းထားပါ။ အသက်ရှူပါ။ အိပ်ထဲကလေမှာ အောက်စီဂျင်ကုန်ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သာကျန်လို့ အဲဒါကိုရှူရင် ပျောက်တယ်။ CO2 ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နည်းက Vagus nerve ဗေးဂပ်စ် အာရုံကြောကို သက်ရောက်စေလို့ သက်သာစေတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေကြို့ထိုးတာ ဘာဆေးမှ မလိုအပ်ပါ။ အနေအထား ပြောင်းပေးပါ။ ချိုဆာချိန်ထိ စောင့်မနေပဲ တိုက်ပါ။ ခေါင်းထောင်တားပြီး ကျောလေးသပ်ပြီး လေထုတ်ပေးပါ။
How to Stop Hiccups in Newborns https://www.youtube.com/watch?v=4C_lnRaCmdY
တမြန်နှစ်က ဒီလိုနေ့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၈ နှစ်ကသိမ်းထားခဲ့တဲ့ သံသေတ္တာလေးကို ဖွင့်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက် မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတာမခံရပဲ ချန်ထားတာလေးေ...
► 2020 (1660)
▼ 2017 (3366)
My Dream စာစီစာကုံး
Misspelled Discourse သတ်ပုံမှား တရားစာများ
Pork Curry ဝက်သားဆီပြန်
Cap ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ဦးထုပ်
Snow outside the house ကားမမောင်းတော့ပါ
Mother’s Day အမေနေ့
Surgical wound ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာ
Acidic Urine ဆီး အက်စစ်ဓါတ်များနေခြင်း
Folic acid ဖေါလစ်အက်စစ်
Frozen shoulder အေးခဲသွားသောပခုံး
Scars အနာအမာရွတ် စာအမာရွတ်
Tint, in 2017 you made 78 new friends!
NCGUB ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် အဓိက
Cholecystectomy Q and A သည်းခြေအိတ် ထုတ်ထားသူ
Flag robbery အလံတော်အမှု ဘယ်ကတုန်းကစသလဲ
Stay Humble သခွတ်ပွင့်
Certificate of Graduation ဆေးပညာဘွဲ့
Happy 2018 ဟက်ပီး မြန်မာစာ
My House and Cows အိမ် နဲ့ နွား
U Kaung ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်း
ည ၁၂ နာရီ
Deep vein thrombosis သွေးပြန်ကြောပိတ်ခြင်း
Reverse gear နောက်ပြန်သွား
Hydronephrosis ဟိုက်ဒရိုနဖရိုးဆစ် ကျောက်ကပ်ရောဂါ
TB အသစ်လား အဟောင်းလား
ဣနြေ္ဒရရ နှင်းတွေ ကျပြန်ပြီ
Ford တဂါလံ ၂၅ မိုင်
The End ပါပီခေတ်
Hollow School ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင်
Coffee and Health ကော်ဖီ နဲ့ ကျန်းမာရေး
Painting media ဘာနဲ့ဆွဲတဲ့ ပန်းချီလဲ
Eat A Red Apple Day ပန်းသီးနီနီ စားတဲ့နေ့
Highest IQs in History ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျ...
Genital warts treatment လိင်လမ်းကြွက်နို့ ကုသနည်းမ...
Kids and Screen ကလေးတွေနဲ့ ဆခရင်မ်
Pregnancy test ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်နည်း
Thyroid Question လည်ပင်းကြီး မေးခွန်း
Cough Syrups ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ
You’re more ignorant than you think you are ထင်တာထ...
Yaza Tint Swe အငယ်ဆုံးသား ရာဇာတင့်ဆွေ မွေးနေ့
Pregnancy Signs ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း လက္ခဏာများ
Old Books မျိုးဆက်ဂုဏ်
STDs links လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သောရောဂါစာများ
Unfortunate Pregnancy ကံမကောင်းတဲ့ ကိုယ်ဝန်
Scrotal swellings ယောက်ျားလေး ကပ်ပယ်အိတ်ရောဂါများ
Pregnancy and Antihistamines ကိုယ်ဝန်နှင့် အအေးမိေ...
Head injury First Aid ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ ရှေးဦးသူနာပြ...
Ovarian cyst မျိုးဥအိမ်အလုံး
Breast Enlargement ရင်သားအမေး
Perineal repair မွေးလမ်းပြုပြင်ခြင်း
Smelly books စာအုပ်ဟောင်း သန့်ရှင်းနည်း
Vaginal itching မိန်းမကိုယ် ယားခြင်း
Group ဂရုဆိုရင် သတိထားပါလေ
20-year journey အနှစ်နှစ်ဆယ် ခရီးများ
အဲတာ နဲ့ အဲဒါ
Gripe Water ကလေး လေဆေး
Bloody or tarry stools ဝမ်းအမည်းရောင်သွားခြင်း
Health Tips for 2018 အကြံကောင်း (၁ဝ) ချက်
Compromised History သမိုင်းကို အစားထိုးခြင်း
EDD ကလေး ဘယ်တော့မွေးမလဲ
Swollen Ankles and Feet ခြေထောက်ရောင်ခြင်း
Cotton flower on the Snow လက်ပံနဲ့ နှင်း
Blocked Fallopian Tubes သားအိမ်ပြွန်ပိတ်ခြင်း
Aspirin (acetylsalicylic acid) အက်စပရင်
Ischemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ
Powerlessness ကျွန်တော့်သြဇာ ဘယ်လောက်ညောင်းသလဲ
This Morning မေးတယ် အေးတယ် ဖွေးတယ်
မရန်း နှင့် မရမ်း
ကုတင် နဲ့ ခုတင်